लिच्छवीकालिन राजा मानदेव र पलाञ्चोक उपत्यका (हालको पाचखाल नगरपालिका) - प्रतिक्षा गर्नुहोस - Suvham News
लिच्छवीकालिन राजा मानदेव र पलाञ्चोक उपत्यका (हालको पाचखाल नगरपालिका) – प्रतिक्षा गर्नुहोस
June 28, 2017 by gsmktm
लिच्छवीकालको इतिहासमा राजा मानदेवको शासनकाललाई महत्वपूर्ण मानिएको छ। मानदेवको समयदेखी प्राचिन इतिहास भरपर्दो स्पष्ट र प्रमाणीत भएको छ, त्यसैले यिनलाई प्रमाणिक राजा भनेर चिनिन्छ। अहिलेसम्मको प्रमाणहरूको आधारमा मानदेवको समय सम्वत् ३८६-४१३(ई.स. ४६४-५०५) सम्मलाई लिएको छ। यिनले नेपालमा शान्त र स्थिर शासन व्यवस्था कायम गरेको पाईन्छ। चाँगुनारायण मन्दिरको अभिलेख अनुसार उनको पालामा राज्यको सीमाना उत्तरमा हिमालय पश्चिममा गण्डकीपारि र पुर्वमा कोशी प्रदेशसम्म फैलिएको थियो। चाँगुनारायण मन्दिरको स्थापना, मानगृहको निर्माण र #मानाङ्क नामक मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पलाञ्चोक मन्दिर पनि मानदेवकै पालामा निर्माण भएको हो। आफू बैष्णव भए पनि बौद्ध धर्मको प्रचारमा कुनै बाधा विरोध नगरेको हुनाले यिनलाई धार्मिक सहिष्णुतावाला व्यक्ति मानिन्छ। यिनको समयमा आर्थिक उन्नतिको साथ साथै विद्या र कला क्षेत्रमा विकास भएको थियो। राजा मानदेव दानी हुनुको साथसाथै प्रजालाई पुत्रवत् माया गर्दथे। त्यसैले उनको शासन व्यवस्थालाई लोककल्याणकारी शासन व्यवस्था भनिन्छ। यिनले गोकर्णमा मानव बस्ति बसाल्नुका साथै नाग बासुकीको पुजा गर्ने चलन पनि चलाए।
पलाञ्चोक भगवती को मन्दिर काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको तत्कालिन साठीघर भगवती गाविसमा अवस्थित छ। काभ्रेको हाल पाँचखाल भमरकोट बाट ७ किलोमिटर पूर्वस्थित यो मन्दिर लिच्छवीकालिन राजा मानदेवले आफ्नी आमाको सम्झनामा निर्माण गर्न लगाएका हुन्। शिल्पकलाको दृष्टिले पलाञ्चोक भगवतिको मूर्ति अद्दितीय मानिन्छ। नक्शाल भगवती र शोभा भगवती अनि पलाञ्चोक भगवती एकै शिल्पकारले तयार गरेको किंवदन्ति रहेको छ।
विक्रम सं २०१९मा नेपाल अधिराज्यलाई १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन गर्नुभन्दा अगाडि हालको काभ्रे जिल्ला पूर्व १ नं. क्षेत्र अन्तर्गत तत्कालीन २८ वटा मौजाहरूको सदरमुकाम चौतारा बाट प्रशासित थियो। “काभ्रे” वर्तमान काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाभित्र पर्ने एक गा.वि.स. हो भने “पलाञ्चोक” साठीघर भगवती गाविसमा पर्ने एक डाँडा हो जहाँ प्रसिद्ध पलाञ्चोक भगवतीको मन्दिर छ।
प्रथम प्रामाणविक राजा मानदेव र राजा अशु बर्माको सासन कालमा हालको पाचखाल र पुरानो पलाञ्चोक उपत्यका मा भेटियका पुराना मोहर जुन मोहोर राजा मानदेव कालिन नेपाल कै प्रथम मोहरमा दर्ज छ । मोहौर को अगिल्तिर पालि भाषामा लेखीयको छ भोगिन र अर्को तर्फ सिह, घोडा हाति लगायत कुबेरको तस्बिर अकित छ। जुन मोहर पलाञ्चोक उपत्यकाका र हालको पाचखाल नगरपालिका वडा नम्बर ७ श्रिराम पाटि मा भेटियो को छ । र जानकारि रहोस पाचखाल श्रीरामपाटि मा रानि पोखरि, माले राजाको दरबार, राजाको धन राख्ने स्तान धनसार र झुगु खोला पाटि रानि पानि भन्य ठाऊ आज पनि जिवितै छ। स्मरण रहोस राजा मानदेवले निर्माण गरेको एेतिहासि पलाञ्चचोक भगवतिको मन्दिर जाने बाटो यहि श्रिराम पाटि हुदै जान्छ, अनौकोट, कोसिदेखा ,खरेलथोक, देवभुमि जहा देवताहरुको आस्रय स्थल र भमरकोट हालको पाचखाल प्रसिद स्थल हुन।: क्रमस
Prevशिवलिंग के हो? हरेक सनातन हिन्दु धर्म मान्यले थाह पाउनु पर्ने चुरो कुरो।
Nextसबै सबै रमाउने….(पञ्चचामर छन्द)